ပြည့် စုံ's စာမျက်နာ - ♥ မြန်မာချစ်သူမိသားစု ♥
ယောက်ျားလေးdaweiBahamasမြန်မာနိုင်ငံ၊ ထားဝယ်မြို့ Share on Facebook
ဘလော့ ပိုစ်များ (363)Discussions (76)အဖွဲ့ များ (32)ဓာတ်ပုံများ (48)Photo Albumsဗီဒီယိုများ (19) ပြည့် စုံ's Apps (1)
ပြည့် စုံ's Likes ပြည့် စုံ's သူငယ်ချင်းများ
အားလုံးကြည်ရန် ပြည့် စုံ's Groups
မြန်မာချစ်သူ မိသားစု ပရဟ…
ရန်ကုန်သူ /သားများ အဖွဲ့
MMC - အင်တာဗျူး
FLash Games များ
ပြည့် စုံ's Discussions
လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ရက်ခန့်ှမှစပြီး ထားဝယ်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်တွင်မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခဲ့သဖြင့် ကားလမ်းအချို့ရေကျော်မှုများဖြစ်ပေါ်ပြီးသွားလာရခက်ခဲ…Continue Started this discussion. Last reply by kanhtwe Jun 19, 2012. ADSl Broband wimax အကြောင်းသိကောင်းစရာ
Branded Workstation များအကြောင်းComputer လောကမှာ Workstation တွေကို Branded Workstation တွေနဲ့ Clone Workstationတွေဆိုပြီးအသုံးပြုကြပါတယ်။ Workstation ဆိုလို့ရူပ်မသွားနဲ့အုံးဗျ။ Workstation…Continue Started this discussion. Last reply by ရဲလင်းဗိုလ် May 19, 2012. အွန်လိုင်းပေါ်မှ အခမဲ့ရတနာသိုက်လေးများ
မူကြိုမှသည် ဘွဲ့ရတဲ့အထိ ပညာလမ်းကြောင်းကို ပြန်လေ့လာကြည့်ရင် အလွန်ခက်ခဲ ပင်ပန်းတယ်လို့ ထင်ရတယ်။ ဒီနေ့ ခေတ်ပညာရေးက မိဘရော၊ ကျောင်းသားပါ အေးအေးသက်သာနေရတဲ့ခေတ်မဟုတ် ပါဘူး။ ပညာဆိုတာကို မရ…Continue Started May 8, 2012 ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး Fashion Website ၁၀ ခု
ယနေ့ ၂၁ ရာစုမှာတော့ ဖက်ရှင်ဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ လူတိုင်းနဲ့ အလွန်ရင်းနှီးနေတဲ့ ဝေါဟာရတစ်ခု ဖြစ်နေပါပြီ။`တောင်းမှာအကွပ် လူမှာအ၀တ်´ လို့ဆိုတဲ့ ရှေးမြန်မာဆိုရိုးစကား တစ်ခုအတိုင်း လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ…Continue Started this discussion. Last reply by suai May 9, 2012. အားလုံးကြည်ရန်
ကျွန်တော်အိမ်လေးကို လာလည်တဲ့အကုန်လုံးကို ကျွန်တော်ပြည့်စုံမှ ကြိုဆိုပါတယ်
လာလည်ကြတဲ့သူတွေ ပျော်ရွှင်ဖို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်
FreeVideoCoding.com ပြည့် စုံ's Photos
ပြည့် စုံ's ရဲ့ Viedo များ
ညှိ့နိုင်လွန်းတဲ့သူ Added by ပြည့် စုံ0Comments
ချစ်သူ Added by ပြည့် စုံ2Comments
ပျော်ရွှင်ခဲ့သော နေ့ရက်လေးများ Added by ပြည့် စုံ0Comments
nayaung liked ပြည့် စုံ's blog post မိန်းကလေးတွေ အတွက်...May 11နှင်းလေပြေ commented on ပြည့် စုံ's blog post မနေ့ကထက် ဒီနေ့ပိုချစ်မဲ့နည်း"ရန်သူတော့ မဖြစ်ချင် ပါဘူး။ မမေးတော့ဘူးနော်။ ကျေးဇူးပါနော်"Apr 18ko ko4 commented on ပြည့် စုံ's blog post အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးတပုဒ်""ဖတ်လို့ကောင်းပါတယ် အားပေးသွားတယ်နော်""Mar 25မေဂွစာ commented on ပြည့် စုံ's blog post မိန်းကလေး နှင့် ယောကျာင်္းလေးပြိုင်ဆိုင်ခြင်း"အားပေးသွားပါတယ်နော်....."Mar 23masusandarhlaing liked ပြည့် စုံ's blog post အချစ်ဆိုတာ တကယ်ချစ်မိသွားရင် ချစ်နေဖို့ပဲလိုတယ်Mar 21ပြည့် စုံ is now friends with Mya Phway Nyat San, phyo wai lwin, နံရိုး and3moreAdminMar 7ပြည့် စုံ replied to ပြည့် စုံ's discussion ဓါတ်ပုံအများကြီးကိုတစ်ခါတည်း (Email) ပို့ချင်ရင် -"ခွင့်လွတ်ပေးပါ ကျွန်တော်လည်း မုံရွာရောက်နေတာနဲ့ စာတွေ ကို ပြန်ပို့အတွက် မရဘူးဖြစ်နေတယ် ဒီမှာက လိုင်းကမကောင်းလို့ ကျွန်တော်မေးကိုပို့ပြီး ဘာတွေ မရဘူးဆိုတာကို ပြန်မေးပေးကြပါနော် သူငယ်ချင်းတို့ တောင်းပန်းပါတယ်
pyiesonesn02@gmail.com"Mar 7thanzawaung replied to ပြည့် စုံ's discussion ဓါတ်ပုံတွေကို Slide Show တခုဖန်တီးတော့မယ်ဆိုရင်....."thank အစ်ကို .........အဲဒါကိုလေ vcd dvd တို့ လို အခွေ မှာ သွန်းချင်ရင် ဘာလိုအပ်လဲ ဘယ်လိုလုပ်ရလဲ ဆိုတာလေး …"Mar 1Heartbreaker(မုန်းလေး) leftacomment for ပြည့် စုံ"မောင်ရေ အရမ်းလွမ်းတာပဲ"Feb 24Ye Thoon Moe replied to ပြည့် စုံ's discussion ဓါတ်ပုံအများကြီးကိုတစ်ခါတည်း (Email) ပို့ချင်ရင် -"အကိုရေ ကျွန်တော့် ပြသနာက picasa3ကိုဒေါင်းပြီးသွားပါ ပီ... ဒါမဲ့ အကိုပြောသလို စာအိပ်ပုံနဲ့မေလ် ပို့တဲ့ အခါမှာတော့ failed to access account information လို့ပဲပေါ်နေတယ်အကို ကျွန်တော့ကို နဲနဲလောက်ကူညီပါဦး Picasa3setting ရဲ့…"Feb 17♥ ♫*♥* ညီမင်းစံ *♥*♫ ♥ replied to ပြည့် စုံ's discussion ဓါတ်ပုံအများကြီးကိုတစ်ခါတည်း (Email) ပို့ချင်ရင် -"လုပ်ထည့်လိုက်မယ်ဂျာနော"Feb 17lawoon commented on ပြည့် စုံ's blog post စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်ထဲကမြန်မာနိုင်ငံFeb 8♥ ♫*♥* ညီမင်းစံ *♥*♫ ♥ replied to ပြည့် စုံ's discussion ဓါတ်ပုံအများကြီးကိုတစ်ခါတည်း (Email) ပို့ချင်ရင် -"ကျေးဇူးပါဗျာ... စမ်းကြည့်လိုက်မယ်နော"Feb 2အဆိပ်သင့်နှလုံးသား liked ပြည့် စုံ's blog post ယောကျာင်္းလေး အချစ်Jan 31Heartbreaker(မုန်းလေး) commented on ပြည့် စုံ's blog post စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်တတ်တဲ့မိန်းကလေးနဲ့ ချစ်သူဖြစ်နေသူများအတွက်ပါ…."ချစ်ဆုံးလေး စိတ်ကောတ်တာကကော ဘာလို့လို့ထင်လဲဟင်"Jan 26ထာဝရ commented on ပြည့် စုံ's blog post စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်တတ်တဲ့မိန်းကလေးနဲ့ ချစ်သူဖြစ်နေသူများအတွက်ပါ…."ကြိုက်သွားပြီ ရှာမယ် အခု စိတ်ကောက်တတ်သူ
ဟိုနေ၇ာ"Jan 20eithandartun liked ပြည့် စုံ's blog post ပန်ချီးကားလေးတစ်ချပ် (ရသ)Jan 19ဆောင်းနှင်းပွင့် commented on ပြည့် စုံ's blog post ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ရယ်လိုက်ကြရအောင်"ဘာမှမမြက်ရဘူးအစိမ်းနဲ့ရေားးတာ မြန်မာချစ်သူကလူတွေတော်တော်အစိမ်းကြိုက်ကြတယ်နော် ဖတ်မရတော့မသိဘူးကောင်းလားမကောင်းလာဆိုတာ"Jan 16ရဲလင်းထွဋ် and ပြည့် စုံ are now friendsJan 14jonhex replied to ပြည့် စုံ's discussion ကိုယ်စက်ကနေ တစ်ခြားသူစက်ကို လှမ်းပိတ်ကြရအောင်"ကျန် တဲ့နည်းလေးတွေ လည်းတင် ပေးပါအုန်း ဗျာ ၊ ဗဟုသုတ ရတာပေါ့၊ :D
"Jan 12 အားလုံးကြည့်ရန် RSS
အချစ်ဆိုတာ ဘ၀ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလို့ပြောချင်တယ်။ အချစ်မရှိရင် ဘ၀ကြီးက ပြည့်စုံမှာမဟုတ်ဘူး။ အချစ်ကြောင့်ပျော်ရွှင်မယ်၊ အချစ်ကြောင့်ဝမ်းနည်းရမယ်။ အချစ်ကြောင့်ငိုကြွေးရမယ်။ ဒီလိုမျိုး ဘ၀ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်တွေ ပြည့်နက်နေတဲ့ အချစ်ဟာ ဒီလောက အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ အရာတစ်ခုပါပဲ
လက်ရှိနေထိုင်တဲ့ နိုင်ငံ ၊မြို့ က ?
ကိုယ်ပိုင်တည်ထောင်ထားတဲ့ website ရှိရင်ထည့်ပေးပါ
ပြည့် စုံ's ဘလော့ ပိုစ်
Posted on December 11, 2012 at 12:00pm5Comments
အချစ်ဟု ဆိုရာတွင် အကြောင်းအရာပေါ် မှုတည်၍ ကွဲပြားသော်လည်းဆက်စပ်နေသော အဓိပ္ပာယ်များကို…
Continue အဆုံးသတ်မှ ဖြစ်တော့မယ်
Posted on December 11, 2012 at 12:00pm 14 Comments
စီးကရက်ကို စိတ်လှုပ်ရှားစွာဖွာရင်း ကောင်လေးက ကောင်မလေးကို ပြောသည်။
အရာခပ်သိမ်းကို ငါဘယ်လောက်ထိ ငြီးငွေ့နေပြီလဲဆိုတာ မင်းသိစေချင်တယ်။
မင်းနေတာက မြို့စွန်မြို့ဖျားမှာ ကားအတန်တန်စီးရတယ်။
မှတ်တိုင်ကနေ မင်းအိမ်ကို နောက်ထပ်တစ်မိုင်လောက်… Continue အိမ်နီးချင်း
Posted on December 11, 2012 at 11:30am 8 Comments
လူပျိုလူလွတ်တွေကိုပဲငှားတဲ့ နှစ်ခန်းတွဲတိုက်ခန်းရဲ့တစ်ခြမ်းမှာ ကျွန်တော်ငှားနေနေတာကြာပြီ။
တစ်နေ့ကမှ ဘေးခန်းကိုလူသစ်တစ်ယောက် ရောက်လာတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့အိမ်နီးချင်းသစ် ဆိုပါစို့။…
Posted on December 10, 2012 at 1:52pm 1 Comment
အဲဒီသီချင်းအတိုင်းပဲ အချစ်က အရမ်းထူးဆန်းတယ်နော်
(♫ ♪ ♫ ♪… အချစ်ဆိုသည်မှာ အံ့သြမှုများနဲ့ဆန်းကြယ်သော အရာ ♫ ♪ ♫ ♪… အချစ်ဆိုသည်မှာ လူသားတိုင်းရဲ့ နှလုံးသားအထက် အရှင်သခင် ♫ ♪ ♫ ♪… အချစ်ဆိုသည်မှာ ကြေကွဲခြင်းနဲ့ မျက်ရည်တို့ရဲ့ ကဗျာ ♫ ♪ ♫… Continue ဘလော့ပိုစ်တင်ရန်
အားလုံးကြည်ရန် Comment Wall (123 comments)
At 3:31pm on February 24, 2013, Heartbreaker(မုန်းလေး) said… မောင်ရေ အရမ်းလွမ်းတာပဲ At 2:57pm on December 25, 2012, thae yu wah said… ** ခရစ္စမတ်နေ့လေးမှာ ပျော်ရွှင်ပါစေလို့ ** At 10:09am on December 18, 2012, thae yu wah said… အလည်ရောက်ခဲ့ပါတယ် ပြည့်စုံ..စိတ်ချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်ပါစေနော်.. At 6:37pm on December 17, 2012, thae yu wah said… မင်္ဂလာပါ ပြည့်စုံ အလည် လာသွားတယ်နော်.. At 5:25pm on December 9, 2012, ဂူဂျွန်ဖြိုး said… ဟိုင်းပါ..လာလယ်တာပါ့နေကောင်းတယ်နော် At 9:16pm on December 6, 2012, ♥¯`» ထာဝရ ရင်ခွင် «´¯♥ said… At 3:36pm on December 6, 2012, Admin♥♥♥ချစ်ဦးမောင်(ရန်ကုန်)♥♥♥ said… သတိရလို့လာလည်တယ် တယ်ရင်းပြည့်စုံ At 3:11am on November 7, 2012, Heartbreaker(မုန်းလေး) said… အချစ်ဆုံးကြီး လာလည်ပါတယ်နော် နောက်ရန်မဖြစ်တော့ဖူး ဒါပေမယ့် လူကြီးပြောလိုက်တဲ့ စကားကြောင့် မုန်းလေး စိတ်တော့မကောင်းဖူး ညဘက်ကို message ပို့ဖော်ရတဲ့အတွက်မုန်းလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် At 10:33am on November 5, 2012, pooh said… ပျော်ရွှင်ပါစေ သူငယ်ချင်း At 12:52am on November 1, 2012, †!Street Fighter!† said… လာလည်သွားပါတယ်ညိလေးပြည့်စုံရေ မှတ်ချက်မရှိသေးပါ။
1. snow myat
7. Ko Nge
8. ချစ်၇အောင် (အညာသားလေး)
10. Chit Snow
16. ★♥♪✞ထာဝရ✞♪♥ ★
♥ ♥ ခင်ပြည့်ပြည့် ♥ ♥
လက်ဆောင်ပေးမယ် Aung Thu
လက်ဆောင်ပေးမယ် aye min
လက်ဆောင်ပေးမယ် Farook raza amjadi
လက်ဆောင်ပေးမယ် han bo
လက်ဆောင်ပေးမယ် jan jan(or)ဂျန်ဂျန်